1 သိန္း မွ3သိန္း ထိ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်တိုက်ခန်းများ
ဈေးနှုန်း 1 သိန္း မွ3သိန္း ထိ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19768395 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19742674 အတွက် Moe Myint Thu Realestate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19735131 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
၈မိုင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မြိုင်ဟေဝန်အိမ်ရာတွင် တိုက်ခန်းဌားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19679774 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19679773 အတွက် Min Mahar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19674332 အတွက် အင်ကြင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19656211 အတွက် အင်ကြင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
8မိုင် မြိုင်ဟေဝန် အိမ်ရာ တိုက်ခန်းငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19643545 အတွက် Win Myanmar Real Estate Angecy Co. Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095198227, 09785565777, 095101257, 09420104610
Win Myanmar Real Estate Angecy Co. Ltd. ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19641912 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19633320 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်